Famerenana: Kobo Glo, ilay mpamaky Kobo vaovao | Ireo mpamaky rehetra
Famerenana: Kobo Glo, ilay mpamaky Kobo vaovao
Villamandos | | orinasa, kobo
El fitaovana vaovao an'i Kobo izay nataon'izy ireo batemy tamin'ny anarana hoe Kobo Glo Teraka tamin'ny fikasana mazava hijoro amin'ny fitaovana Amazon ary raha jerena ireo toetra mampiavaka azy dia tsy isalasalana fa ho lasa safidy tsara ho an'ny Kindle, lamaody tato ho ato.
Ny endri-javatra lehibe dia ahitana ny efijery misy vahaolana 1024 × 768 teboka izay izahay hanome kalitao mamaky fo mahaliana ary ny fahafaha-mifehy ny haavon'ny hazavana amin'ny efijery (tsy tokony hafangaro amin'ny jiro aoriana).
Mba hanombohana fanaovana famerenana mahaliana ity fitaovana ity dia ilaina ny manomboka amin'ny fiezahana hahita ny rafitr'izy ireo antsoina hoe Jiro fampiononana ary izany dia mampahatsiahy antsika betsaka ilay hita amin'ny fitaovana hafa, toy ny ao amin'ny Nook SimpleTouch miaraka amin'ny GlowLight.
Amin'ny sary iray mivezivezy amin'ny tambajotran'ny tambajotra, azonao atao ny mahita ny fahasamihafana eo amin'ny rafitra jiro sy mankasitraka ny fahasamihafana.
ny Kobo Glo endri-javatra lehibe Izy ireo dia:
habe: 114x157x10 mm
lanja: 185 grama
efijery: Enina santimetatra misy vahaolana 1024 × 768 teboka ary ambaratonga volondavenona 16 samy hafa
Luz: Ny fitaovana dia noforonina tamin'ny haitao hazavana hazavana ao anatiny, miaraka amina sosona bitika kely manify ho an'ny faharetana ary na ny fizarana maivana aza
efijery: Namboarina tsy nisy vera izy io mba hialana amin'ny taratra. Ny efijery mikasika azy avo lenta dia manohitra ny taratra ary mahatohitra mafy ny dian-tanan'ny rantsantanana
bokotra: Manana bokotra roa izy. Amin'ny voalohany dia azontsika atao ny mamono sy mamono ilay fitaovana. Ao amin'ny bokotra faharoa dia afaka mifehy ny hazavan'ny fitaovana isika
Conectividad: Manana fifandraisana WiFi izy io
fitehirizana: Ny fitadidiana anatiny ny fitaovana dia 2 Gigs ary azo itarina hatramin'ny 32 Gigs amin'ny alàlan'ny karatra Micro SD
bateria: Ny bateria azontsika vakiana tao amin'ny tranokala Kobo ofisialy dia afaka maharitra iray volana miaraka amin'ny fifandraisana Internet tsy misy tariby ary tapaka ny jiro ary maharitra hatramin'ny dimy amby dimampolo ora ny fampiasana tsy tapaka miaraka amin'ny hazavana
Ny vidin'ny Kobo Glo dia 129.99 euro, vidiny tena mitovy ary manakaiky ny an'ny fitaovana hafa eny an-tsena ary manana toetra mitovy amin'izany.
Raha tsy maintsy nanome hevitra isika (tena manokana sy tsy azo nafindra) rehefa avy nanandrana izany nandritra ny minitra vitsy ary manao ny marina dia mieritreritra aho miatrika fitaovana lehibe izahay ary miaraka amina toetra vitsivitsy izay tsy hita zavatra, indrindra amin'ny famolavolana, ny famaranana ary ny fisian'ny kojakoja ilaina hahatratra ny haavon'ny mpifaninana lehibe aminy.
Raha mieritreritra ny hividy ilay Kobo Glo vaovao ianao ary efa naharesy lahatra anao hatramin'ny voalohany dia aza omena torohevitra ary mividy azy io izao satria fitaovana azo antoka io.
Fanazavana fanampiny - Fampitahana: Sony PRS-T1 Vs Sony PRS-T2
Loharano - Kobo.com
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » kobo » Famerenana: Kobo Glo, ilay mpamaky Kobo vaovao
Daniel Soler dia hoy izy:
Mifandraika amin'ny fanatanterahana ny kalitaon'ny vidiny, safidy tena tsara izy io, mampifangaro ny tombony rehetra ananan'ny mpamaky e-mpamaky iray hafa ao anaty iray, ary tsy misy fiakaran'ny vidiny tena lehibe.
Efijery tsara, nohazavaina, wifi, fanaraha-maso, Micro-sd ary fiainana bateria tena tsara.
Tsy misy isalasalana, 130 € lany tsara.
Valiny tamin'i Daniel Soler
Tsy misy isalasalana, ny teboka tsara indrindra manohana azy dia ny jiro efijery izay tsy ananan'ny ankamaroan'ny fitaovana eny an-tsena.
Jordi Gisbert dia hoy izy:
Mpamaky iza no hatoroinao ahy hividy jiro amin'ity Krismasy ity sa mendrika ny hividy ny hafa, ary raha mirehitra ny valiny, iza no hatoro anao?
Valiny tamin'i Jordi Gisbert
Raha manampy dia hanova ny mpamaky aho ary mihevitra ny Sony PRS-T2 sy ny Kindle Paperwhite ho azo atao.
wirelessna dia hoy izy:
Vao nividy Kobo Glo aho ary nanana boky vitsivitsy alaina amin'ny PDF amin'ny solosainako. Ka ny zavatra voalohany nataoko dia ny famindrana azy ireo ao amin'ny ebook ary sokafy izy ireo: mivoaka dwarf ilay taratasy ary tsy manome ahy ny safidy hampitombo azy io bebe kokoa, na mitady ao amin'ny rakibolana ireo teny izay tsy fantatro. ..
Ka nanandrana ny iray amin'ireo boky izay maimaim-poana tao amin'ny ebook aho ary amin'ireo dia nomeny ahy ny safidy. Midika ve izany fa tsy ny diksionera sy ny haben'ny lahatsoratra sns ihany no azoko ampiasaina amin'ny boky alaina mivantana avy amin'ny kobo?
Ampio aho !!! 🙂
Mamaly an'i Wirelessna
Irene Benavides dia hoy izy:
Angamba ireo rakitra PDF azonao dia vonona amin'ny taratasy lehibe A4 fa tsy ho an'ny mpamaky 6 ″. Tsy azonao atao ny mitantana ny haben'ny endri-tsoratra ao amin'ny pdfs, raha be indrindra dia hamela anao "milalao" miaraka amin'ny fiovana sy ny zoom, ka manana safidy roa ianao: 1) mamorona pdf ampifanarahana amin'ny mpamaky 6 or na 2) mampiasa format rakitra hafa.
Valiny tamin'i Irene Benavides
fanontaniana iray momba azy io, ny fifandraisana eo amin'ny wifi ve tsy hampiasaina amin'ny fivarotanao ihany, sa manana Internet browser ianao?
Raha ny marina dia mila fotsiny ilay ebook aho mba hananana sela kely solar hamenoana ny tenany (toy ny an'ny calculatera sasany). Ka raha manana ny faharetan'ny ambiny izy ireo (na dia any amin'ny nosy efitra aza 😉)
Ny fampiharana famakiana tsara indrindra ho an'ny Android
Ny tranomboky nomerika misy antsika dia tantanana miaraka amin'i Caliber (II)